खुशी हुदै १०६ बर्षकी रामकली भन्छिन: ‘मर्नुभन्दा अगाडि भगवान भेटें’ … – पुरा पढ्नुहोस्……
रौतहट। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ को मुसहर बस्तीमा रामकली देवी हजारा पासवानले दशकौं घाम–पानी खेपिन्। त्यो घाम–पानी जीवन भोगाइ र प्रकृति दुवैको थियो।
रामकलीले बल्ल यो उमेरमा आएर ‘भगवान्’ भेटिन्, जसले उनलाई बस्नका लागि भरपर्दो घर दिलाए। बाल्यकालदेखि देखेको सपना १०६ वर्षमा आएर पूरा हुँदा उनी दंग छिन्। उनको सपना पूरा गरिदिने भगवान् हुन्, सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)।
सन्तपुर नमुना एकीकृत बस्तीमा मंगलबार उनीसँगै ४७ परिवारका लागि निर्मित घरहरुको साँचो हस्तान्तरणपछि नयाँ घरमा सर्न आतुर रामकलीको अनुहार खुसीले धपक्क बलेको देखिन्थ्यो।
फर्केर हेर्दा फुसले छाएको र माटोले लिपेको सानो झुपडीमा रामकलीसँग नमीठा अनुभव मात्र छन्। चैत–बैशाखको हुरी होस् या हिउँदको शीतलहर, उनले त्यही झोपडीमा बिताइन्। वर्ष बिराउँदै आउने बाढी र डुबानका चोटहरु पनि नियमित नै थिए। त्यो चोटमाथि पारिवारिक बज्रपात पनि सानो थिएन।
सानै उमेरमा विवाह गरेकी उनले ४ छोरी र १ छोरालाई जन्म दिएको केही समयमै श्रीमान् गुमाइन्। ज्याला र मजदुरी गरेर गाँसको जोहो गर्ने सारथी गुमाउँदा पनि उनले जेनतेन घर–व्यवहार सम्हालेर छोरा–छोरीको बिहेबारी समेत पार लगाइन्। यस्तैमा उनले एकमात्र छोरो पनि गुमाउनुपर्‍यो।
पति र छोरा गुमाएर दुवै हात भाँचिएपछि उनले परिवारलाई २ गाँस खुवाउन अनेक संघर्ष गरिन्। त्यस्तो स्थितिमा उनले एउटा ढुक्कको घर बनाउने सपना त परको कुरा, चाडपर्वमा मुख फेर्न मीठो मसिनो खुवाउने र सन्तानलाई शिक्षाको उज्यालो दिने सोच र हिम्मत समेत जुटाउन सकिनन्।
नाति राजाराम हजारा र नातिनी बुहारी सुगन्धीदेवी हजारासँग बस्दै आएकी रामकलीले गत वर्षायाममा ठूलो क्षति बेहोरिन्। वर्षाले तराई जलमग्न हुँदा रामकली जस्तै कैयौं गरिबको बास उजाडियो। बाढीबाट रामकलीसहित सन्तपुरका ४७ माझी परिवारको बस्ती एकाएक बगर बन्यो।
प्रकृतिले दिने यस्तो अन्याय यहाँका बासिन्दका लागि नौलो भोगाइ पनि थिएन। उनीहरु पुर्पुरोमा हात राखेर शोखा शम्भुनाथ (भगवान् भरोसा) मै फेरि बाँच्ने मेलो कष्टपूर्वक अघि बढाउँथे। तर, यस पटक भने हास्य कलाकार धुर्मुस र सुन्तलीको परोपकारी दृष्टि परेपछि माझी बस्तीको मुहार फेरियो।
धुर्मुस र सुन्तलीले बाढी प्रभावित स्थानहरुमा उद्धार र राहत वितरण गर्ने क्रममा सन्तपुरवासीको पीडा देखेपछि सहयोग रकम जुटाउँदै गत असोज २८ बाट एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गरेका थिए।
अनेक अवरोध छिचोल्दै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले ४७ परिवारका लागि १ सय १५ दिनमा कुल ५ करोड ९४ लाख ८७ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँको लागतमा बस्ती निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका हुन्।
बस्तीमा वृद्धा रामकलीका आँखामा मात्र खुसी चम्किएको छैन, बस्तीका ९० बालबालिकाले आफ्नै ठाउँमा आधारभूत विद्यालय पाएर सपना देख्ने बाटो पाएका छन्।
सन्तपुर बस्तीका भगवान् बनेका धुर्मुस यो बस्तीको निर्माण सफलतापछि के भन्छन् त?
उनले उत्साहित हुँदै सुनाए, ‘हिजो मदिरा र कुलतले लट्ठ पर्नेहरु पनि आज धुर्मुस र सुन्तलीसँग मदिरा र कुलतमा कदापि नलाग्ने प्रण गरिरहेका छन्। हिजो नयाँ मान्छे आउँदा अप्ठेरो मानेर शिर झुकाउने बासिन्दा आज स्वागतका लागि आतुर देखिन्छन्।’तस्वीर सौजन्य- सिताराम कट्टेल
Prevरिलिज भएको १ साता नबित्दै युट्युबमा सार्वजनिक भयो ‘पटुकी’ हेर्नुहोस …. पुरा फिल्म हेर्नुहोस
Nextकाठमाडौमै भयो यस्तो अचम्मित पार्ने बिबाह ! ढकालको छोराले कामिनी बाजा बजाएर भित्र्याए
रंगशाला निर्माण स्थलमा धुर्मुस सुन्तलीको श्रमदान , यसरी फिल्डमा उत्रिए धुर्मुस सुन्तली-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
“मन बिना को धन ठुलो कि ” अशोक दर्जीलाइ सहयोग गर्दै चर्चित गायिका मञ्जु पौडेल (भिडियो सहित)
मदन भण्डारीको काठको घर भित्र गुप्त कोʼठा – रहʼस्य यस्तो (भिʼडियो सहित)
एसपी राना आफै किन रातको समयमा सवारी चेकिङ गर्न पुगे ? हेर्नुहोस